Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in ciidamada Al Shabaab ay isku fidiyeen deegaanno dhowr ah oo hoos yimaad magaalooyinka ugu muhiimsan gobolkaas.
Ciidamo aad uhubeysan oo katirsan Al Shabaab ayaa qabsaday deegaanno dhowr ah oo ku teedsan wadada laamiga ah ee xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar, sidoo kale ciidamada ayaa gacanta ku dhigay inta badan deegaannada ku teedsan wabiga Jiinkiisa.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in xoogaga Al Shabaab ay gaareen deegaannada Qalimoow,Cadaloow iyo deegaanno kale oo dhammaantood ay isaga firxadeen maleeshiyaadkii dowladda Federaalka ee Mushaar la'aanta ugadooday.
Dad ku sugan Sh/dhexe ayaa sheegay in shalay illaa iyo maanta xoogaga Al Shabaab ay dadka ugu muxaadareynayeen deegaannada Booroow iyo Raaxooy oo udhow magaalada Jowhar oo ah xarunta gobolka Shabeellaha dhexe.
Deegaanka Qalimoow oo ku dhow Balcad ayaa kamid ah meelaha ay gaareen xoogaga Al Shabaab, warar kale oo soo baxay waxay sheegayaan in Al Shabaab ay ku dhowaadeen tuulada Gololeey oo saldhig melleteri ay ku leeyihiin ciidamada Burundi ee lagu dhiig bixiyay dagaalka ka socda gobolka.
Bishii lasoo dhaafay ayay xoogaga Al Shabaab dib ula wareegeen deegaanka istiraatiijiga ah ee Xawaadleey iyo sedax tuulo oo hoos yimaad, dadka odorosa arrimaha gobolka ayaa sheegaya in ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Burundi ay marayaan marxaladda dhiigbaxa kadib markii lagu dagaaliyay dagaalka waqtigiisu dheeraaday.
Maamulka dabadhilifka ah ee isku magacaabay Hirshabelle ayaan laheyn awood uu isaga caabin karo xoogaga Al Shabaab, arrimahan waxay imaanayaa xilli Ururka Midowga Afrika uu amar kusiiyay dowladda Burundi in 1000 askari ay ka saarto sh/dhexe.